विवाह २०२२ - सजावटमा ठूला प्रवृत्तिहरू | बेजिया
विवाहको सजावट २०२२ मा उत्कृष्ट प्रवृत्तिहरू
सुसाना Godoy | 13/05/2022 16:00 | बोडस
विवाह २०२२ पहिले नै सुरु हुँदैछ, त्यसैले हामीले जान्नै पर्छ कि सजावट मा ठूला प्रवृतिहरू के हो जुन व्यापक छ। लगभग निश्चित रूपमा तिनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो विवाहलाई प्रेरित गर्न सक्षम हुन विचारहरूको श्रृंखला दिनेछन्। यदि तिनीहरू एक प्रवृत्ति हो भने, तिनीहरू विनाशकारी छन् र तिनीहरू विकल्पहरू हुन् जसले कुरा गर्न धेरै दिनेछ।
त्यसोभए, यदि तपाइँ तपाइँको ठूलो दिनमा ती सबै चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ तिनीहरूलाई भेट्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्न। यो सत्य हो कि विवाहको वरिपरि सबै कुरा एकदम व्यक्तिगत छ। त्यसैले हामीले गर्न सक्ने सबै भन्दा राम्रो हो यी प्रवृतिहरूलाई प्रेरणाको रूपमा लिनुहोस् र तिनीहरूलाई हाम्रो स्वाद अनुसार हाम्रो विवाहमा थप्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिनको लागि कल्पना गरिरहनुभएको कुरामा अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ!
1 २०२२ को विवाहका लागि हल्का र प्राकृतिक रंगहरू
2 ह्याङ्गिङ ल्याम्पहरूबाट बत्ती बालिन्छ
3 विवाहको सजावट २०२२ मा संयुक्त तालिकाहरू
4 अतिथिहरूलाई मौलिक तरिकामा व्यवस्थित गर्न शर्त लगाउनुहोस्
२०२२ को विवाहका लागि हल्का र प्राकृतिक रंगहरू
रंगहरूको विषयवस्तु सधैं सबैभन्दा धेरै टिप्पणीहरू मध्ये एक हो। तर यस अवस्थामा तटस्थ टोनप्रति प्रतिबद्धता बलियो हुँदै आएको देखिन्छ। त्यसैले दुबै सेतो र बेज र हल्का शेडहरू विकल्पहरूको प्यालेटमा थपिनेछ। किनकी तपाई के प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ त्यो अधिक प्राकृतिक स्थान हो, प्रकृति संग जोडिएको छ जुन हाम्रो वरिपरि छ। यस कारणका लागि, हामी थप सन्तुलित ठाउँहरू बढाउनको लागि सबैभन्दा उल्लेखनीय रङहरू छोड्नेछौं। निस्सन्देह, यदि तपाइँ केहि जीवन्त रंग थप्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ यसलाई तपाइँको स्वाद अनुसार सधैं अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
ह्याङ्गिङ ल्याम्पहरूबाट बत्ती बालिन्छ
विवाहको सजावटको कुरा गर्दा प्रकाश सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भागहरू मध्ये एक हो। किनभने हामीले यसलाई भोजलाई अझ बढी महत्त्व दिन प्रयोग गर्न सक्छौं। प्राकृतिक फिनिशको साथ जारी राख्दै, हामी कहाँ विकल्पको सामना गरिरहेका छौं ह्याङ्गिङ ल्याम्पहरू वास्तविक नायक हुनेछन्। तर धेरै आकर्षक छैन, तर तिनीहरूसँग गिलास फिनिश हुनेछ जसले यसलाई सबैभन्दा सुरुचिपूर्ण फिनिश बनाउँछ। निस्सन्देह, मैनबत्तीहरू पनि आवश्यक विवरणहरू मध्ये एक बन्छ। ताकि त्यहाँ कुनै समस्याहरू छैनन्, तपाईं तिनीहरूलाई गिलास फूलदानहरू भित्र राख्न सक्नुहुन्छ, सजावटलाई थप परिष्कृत हावा दिँदै।
विवाहको सजावट २०२२ मा संयुक्त तालिकाहरू
केही वर्षदेखि, तिनीहरू प्रोटोकल तोड्न चाहन्छन्। लामो टेबुल भएको यो कुरा, सधैं दुलहा र दुलहीबाट अलग, सधैं त्यस्तो चीज होइन जुन धेरै अवस्थामा मन पराइन्छ। त्यसोभए, त्यहाँ दुवै लामो र गोल तालिकाहरूको संयोजन हुन सक्छ। यसबाहेक, यो केहि समय देखि गर्दै आएको छ र यो अझै पनि सफल हुने देखिन्छ। यसबाहेक, दुलही र दुलही सधैं godparents संग बस्दैनन्, तर हरेक पटक तपाईले देख्नुहुन्छ कि तिनीहरू एक्लै टेबलमा छन् तर पाहुनाको नजिक, वा एकअर्कासँग पनि। तपाईले सधैं प्रत्येक जोडीसँग के राम्रो हुन्छ भनेर छान्नु पर्छ, तर यो सत्य हो कि प्रोटोकलहरू छोडिएको जस्तो देखिन्छ।
अतिथिहरूलाई मौलिक तरिकामा व्यवस्थित गर्न शर्त लगाउनुहोस्
गएका ती टेबलहरू छन् जसमा नम्बरहरू थिए र ती प्रत्येकमा धेरै अतिथिहरू भेला भएका थिए। ठीक छ, मौलिकता हरेक आत्म-सम्मान विवाह मा स्थित छ। तसर्थ, यी संख्याहरूको सट्टा तपाईले तिनीहरूलाई सधैँ राख्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक टेबलमा गीत वा चलचित्रको शीर्षक र कलाकारहरूको नाम पनि राख्दै। कुनै पनि कुरा लामो समयसम्म जान्छ जबसम्म यो धेरै मौलिक तरिकामा विचार पूरा गर्न हो। यस्तो देखिन्छ कि हरेक वर्ष आविष्कारहरू हाम्रो पक्षमा छन् र थोरै कल्पनाको साथ तिनीहरू अझै पनि सफल हुन सक्छन्। त्यसै गरी, तपाइँ सधैं कर्क राख्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाइँ नामहरू सहित सम्पूर्ण सूची प्रकाशित गर्नुहुन्छ वा, प्रत्येक तालिकामा, यसको नाम परिभाषित गर्ने केही विवरणहरू राख्नुहोस्। यो एक महान विचार जस्तो लाग्दैन? त्यसोभए तपाईं विवाहको सजावट २०२२ मा यसको लागि जान सक्नुहुन्छ
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » बोडस » विवाहको सजावट २०२२ मा उत्कृष्ट प्रवृत्तिहरू
तपाईंको आँगन वा बगैंचामा न्यानोपन दिनको लागि बाहिरी फायर पिटहरू
अपवर्तक शल्यक्रिया के हो?